Manchester City Oo Xiiseyneysa Da 'yarka Barcelona Nico Gonzalez
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester City oo xiiseyneysa da ‘yarka Barcelona Nico Gonzalez
April 17, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Manchester City ayaa la rumeysan yahay inay il gaar ah ku heyso horumarka xiddiga kooxda Barcelona Nico Gonzalez .
19 jirkaan – oo ugu horeyn ka shaqeeya qadka dhexe ee daafaca – ayaa si deg deg ah ula qabsaday kooxda Barcelona B ka dib markii uu ka soo gudbay akadeemiyada La Masia.
Gonzalez ayaa durbaba 20 kulan u saftay kooxda B xilli ciyaareedkan – isagoo diiwaan geliyay labo caawin – Blaugrana ayaana lagu soo waramayaa inay dooneyso inay da ‘yarka ku xirto heshiis cusub oo seddex sano ah iyadoo lagu abaalmarinayo qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah.
Kooxda reer Catalan ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay dooneyso inay ku biiriso kooxda koowaad, laakiin sida laga soo xigtay AS , Man City ayaa diyaar u ah inay soo kabsato haddii wiilka da ‘yar ee uu dhalay ciyaaryahankii hore ee Spain iyo tababaraha dhalinyarada City Fran Gonzalez – ay doortaan inay la wareegaan.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaas ku dareysa in baacsiga City ee Gonzalez ay noqon karto mid cakireysa xiisaha Ajax , Koeman ayaana u aqoonsaday wiilkaan inuu yahay bedelka mustaqbalka fog ee Sergio Busquets .
Gonzalez ayaa todobo kulan u saftay xulka 17 jirada Spain intii u dhaxeysay 2018 iyo 2019, laakiin weli uma uusan ciyaarin xulka 19-jirada.